Real Madrid oo ka fiirsaneysa iibinta Raphael Varane madaama qandaraaskiisu hoos u dhacayo.
Home Horyaalka Spain Real Madrid oo ka fiirsaneysa iibinta Raphael Varane madaama qandaraaskiisu hoos u...
Real Madrid ayaa aaminsan inay tahay inay iibiyaan daafaca dhexe ee reer france Raphael Varane xagaagan iyadoo laga cabsi qabo in ninka reer France uusan qandaraaska u kordhin doonin kooxda Real madrid.
Los Blancos waxay si adag uga shaqeyneysay cusbooneysiinta qandaraasyada sida Luka Modric iyo Sergio Ramos, sidaas darteedna xaalada qandaraas ee Varane ayaa xoogaa hoos u dhacday. Waxaana u harsan kaliya 12 bilood heshiiskiisa iyo dhamaadka xilli ciyaareedka welina ma uusan muujin inuu qorsheynayo inuu sii joogayo iyo in kale.
Qirashadaas ayaa ka dhigtay hogaamiyaasha Real inay walaac ka muujiyaan sida Marca ay u aragto in aaminaada guud ay tahay in Varane uusan dooneynin inuu sii dheereysto joogitaankiisa Santiago Bernabeu, iyadoo ninka reer France lagu xamanayo inuu doonayo inuu sii baxo ka dib toban sano oo uu kooxda joogay.
Real ayaa isku dayi doonta inay ka dhaadhiciso Varane inuu cusbooneysiisto heshiiskiisa isbuucyada soo socda, laakiin hadii uusan dooran, wuxuu ku heli doonaa liiska suuqa kala iibsiga xagaagan ka hor inta uusan si xor ah uga tagin 2022.
Markii uu ahaa 27 jir ku guuleystay wax walba oo ay tahay inuu ku guuleysto koox iyo heer caalami, waxaa laga yaabaa inaysan jirin wax gabaabsi ah oo u tartamaya Varane.
Qaar badan oo ka mid ah wararka xanta ah ee hore ayaa ku magacaabay Manchester United inay yihiin kuwa ku habboon. Red Devils waxay isku dayday inay la soo saxiixato Varane sanadka 2019 xiisahooda ayaa laga yaabaa inuu sii jiro, iyadoo Ole Gunnar Solskjaer uu doonayo inuu helo lammaane cusub oo uu la dheelsiiyo daafaca man united Harry Maguire.
Previous articleMarco Verratti oo shidaal ku daraya wararka xanta ah ee Lionel Messi ee ku aadan PSG
Next articlePSG oo heshiis qarsoodi ah la gashay Real Madrid oo ku saabsan Sergio Ramos